चिनियाँ नयाँ वर्ष, पनि जानिन्छ वसन्त तिहार वा लुनार नयाँ वर्षको, चिनियाँ पात्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना हो. यो एक विशेष अवसर द्वारा चिन्ह लगाइएको गर्नुपर्छ परिवार जमघट, खाना संस्कार, मन्दिर मा भेटी, र - पाठ्यक्रम - आतिशबाजी. त्यहाँ युरोप मा चिनियाँ नयाँ बर्ष मनाउन को लागी केहि विशेष छ. यो एक प्राचीन चिनियाँ परम्परा सहभागी एक अद्वितीय मौका छ, फिर्ता डेटिङ 4000 वर्ष. तपाईं मौका जब यो बाहिर सम्झना छैन!
No.1 चिनियाँ नयाँ बर्ष मनाउन को लागी यूरोपमा | मैड्रिड, स्पेन
पेरिस बस बारेमा flashy parades छैन र विस्तृत सजावट हुनत. यो समय आफ्नो सर्वोत्तम राखिएको गोप्य को 13 औं जिल्ला स्थित दुई बौद्ध मन्दिर छ. यहाँबाट परिवारहरू चीन, भियतनाम, र कम्बोडिया आफ्नो अभिवादन तिर्न आउन र मा स्वागत नयाँ वर्ष. चिनियाँ कला र शिल्प को प्रदर्शन आनन्द, पकाउँदै, र परम्परागत नृत्य र संगीत. रोशनी शहर साँच्चै यसको नाम वर्ष को यो समय सम्म बाँच्न हेर्नुहोस्. र सबै भन्दा राम्रो कुरा तपाइँ सक्नुहुन्छ एम्स्टर्डम गर्न पेरिस बाट रेल यात्रा र दुवै शहर मा मनाउन!
रमाइलो: एम्स्टर्डम गरेको बदनाम लाल-लाइट जिल्ला एक वास्तविक बौद्ध मन्दिर घर छ. प्रत्येक बर्ष, तपाइँ एम्स्टर्डम र वरपर यूरोप मा चिनियाँ नयाँ बर्ष मनाउन सक्नुहुन्छ Fo Guang शान उहाँले भयो एक विशेष कार्यक्रम संग.
इ England्ल्याण्डमा तीन मुख्य क्षेत्रहरू छन् जुन यी उत्सवहरू समात्दछन्; ट्राफलगर स्क्वायर, चिनटाउन, र शाफ्ट्सबरी एवेन्यू. प्रत्येक विशिष्ट गतिविधिहरु मा अद्वितीय छ र घटनाहरू तिनीहरूले प्रदान; आगंतुकों गर्न जो एक कठिन समय छनौट हुनेछ.
यूरोप मा चिनियाँ नयाँ बर्ष मनाउन र यी शहरहरु मध्ये एक को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो? रेल बाट, को पाठ्यक्रम! प्रयोग SaveATrain मिनेटमा उत्तम सम्झौता बुक गर्न!
#चिनियाँ नयाँ वर्ष #yearofthebpig europetravel longtrainjourneys रेल यात्रा रेल यात्रा ट्राभेलमस्टरडम travelfrance